သားဖြစ်သူရေမွန်ကွယ်လွန်ခြင်း ၅ လပြည့်အလှူလေး ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ခင်မြတ်မွန် - Myanmarload
သားဖြစ်သူရေမွန်ကွယ်လွန်ခြင်း ၅ လပြည့်အလှူလေး ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ခင်မြတ်မွန်
23-Nov-2021 3pm ·5days ago
Idiots band ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တေးရေး ၊ တေးဆို ဂီတပညာရှင်၊ အဆိုတော်ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဒီနေ့ဆိုရင် ၅ လတောင်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုတော်ရေမွန်ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ရင်း ခက်ခဲပင်ပန်းစွာနေထိုင်ခဲ့ရတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကရင်ပြည်နယ်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်ရေမွန်ဟာ အနုပညာပါရမီပါပြီး အရမ်းကို တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာ ပရိသတ်တွေဟာ များစွာ ယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မကြွေလွင့်သင့်ပဲကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တာကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာဆိုရင်လည်း တကယ်ကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်လှပါဘူး။ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ သားဖြစ်သူနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိခင်ကြီး အဆိုတော်ခင်မြတ်မွန်ဟာဆိုရင်လည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှအောက်မေ့သတိရနေခဲ့တာပါ။ မိခင်ကြီး ခင်မြတ်မွန်ဟာ သားဖြစ်သူလေး ထွက်ခွာသွားတာ ၅ လပြည့်တဲ့နေ့မှာလည်း သားဖြစ်သူလေးအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုလေး ရေးတင်ထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ တွတ်ပီလေး ဆုံးပါးသွားတာ
ဒီလ 26 th ကလဲ တွတ်ပီ 33 နှစ်ပြည့်
မွေးနေ့မို့ သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြားလေး
Khin Myat Mon's Facebook
အကန်တွေပြောပြီး blame မလုပ်ကြနဲ့နော်!
အစီအစဉ်လုံးဝမရှိ ! နကိုကလဲအဲ့လို
ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းလုပ်ကိုင်ပေးရမှာလေ !!!
လာ blame မလုပ်ကြပါနဲ့နော် !
ဒါကြောင့်. . .
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ 🌹”
မိခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာ အကြီးမားဆုံးပါပဲနော်။ သားဖြစ်သူကို တစ်ရက်မှမပျက် လွမ်းဆွတ်သတိရနေခဲ့တာ။ ကိုရေမွန်တစ်ယောက်လည်း အန်တီခင်မြတ်မွန် ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူလေးတွေကြောင့် အေးချမ်းတဲ့ ကောင်းရာမွန်ရာဘဝမှာ ရှိနေမှာပါ။